भर्खरै मात्र अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस (जुन २१) नेपालमा पनि भव्य रुपमा मनाईएको छ । दिवस्का अवसरमा राष्ट्रपतिले नागरिकहरुको सुु–स्वास्थ्यको कामना गर्दै शुुभकामना दिनुुभएको छ । त्यस्तै दिवस्को अवसरमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरुले शुुभकामना दिनुुभएको छ भने धेरै जिल्लाहरुमा योगाभ्यास सहित दिवस् मनाईएका खवर छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा सन् २०१५ देखि हरेक वर्ष जुन २१ लाई अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसका रूपमा विश्वभर मनाउन थालिएको हो । यसपटक ‘मानवताका लागि योग’ भन्ने मूल अभिप्रायका साथ यो दिवस मनाइएको छ ।
विकासबाट प्राप्त हुने मानवीय खुसीलाई योगाभ्यासबाट प्राप्त हुने सकारात्मक ऊर्जासँग जोड्दै सुखी, समुन्नत र शान्तिपूर्ण समाज निर्माण गर्न सबैलाई सफलता प्राप्त हुने कुरा योग प्रशिक्षकहरुले बताउने गरेका छन् । व्यक्तिको शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक स्वास्थ्यलाई सुदृढ गर्ने अभ्यासको रुपमा योग रहेको छ । यसकारण योगलाई शारीरिक व्यायामका रूपमा मात्र नभएर चिन्तनसहितको क्रिया मानिएको छ ।
निश्चित अनुशासन र पद्धतिमा बाँधिएर अवलम्बन गरिने योगाभ्यासबाट शरीरमा स्फूर्ति बढ्ने, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको विकास हुने तथा सकारात्मक सोचतर्फ व्यक्तिलाई उत्प्रेरित गर्नसकिने विश्वास बढेको छ । पछिल्लो समय योगप्रतिको चासोले पनि योगको महत्व बढेको छ ।
योगको विकासमा नेपाली सभ्यताको योगदानबारे हाम्रा विद्वान्विदुषी, अध्येता एवं योगगुरुहरूबाट प्रशस्त प्रकाश पारिएको छ । नेपालको भूमिमा उद्भव एवं विकास भएको मानिने शिव, जनक, बुद्ध, किरात र बोन सभ्यतामा योगको विशिष्ट स्थान रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
सामाजिक र सांस्कृतिक जीवनशैलीसँग जोडिएका वास्तुकला, चित्रकला र मूर्तिकलामा योगको प्रत्यक्ष उपस्थिति रहेको र योगलाई हाम्रो शिक्षाको अङ्गका रूपमा विकास गर्दै यसबारे हुने अध्ययन अनुसन्धानलाई थप सुदृढ बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता औंल्याईएको छ ।
यम, नियम, आसन, प्रणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान र समाधिलाई योगका आठ सोपान अर्थात् अष्टाङ्ग योग नामकरणबारे चर्चा हुने गर्दछ । योगको पृष्ठभूूमि निकै लामो छ ता पनि औपचारिक रुपमा गरिने कार्यक्रम र प्रचारप्रसार निकै पछि मात्रै भएको देखिन्छ । धार्मिक विश्वास अनुसार भगवान शिवद्वारा अनुसरण गरियको पद्धति योग हो । योगले मानिसमा आफुभित्र रहेको रोगलाई निरोध गर्ने गर्दछ ।
व्यक्तिगत शान्ति र स्वास्थ बिना बिकाश र वृद्धि सम्भव नभएको भन्दै समयक्रमसंगै योग दिवस मनाउन थालियको पाईन्छ । योग को अर्थ जोड्नु , मिल्नु वा यकाकार हुनु अर्को शब्दमा भन्नू पर्दा जिवात्मा र प्रमात्माको मिलन नै योग हो ।
योग अज्ञान्ता वाट ज्ञान तर्फ जड बाट चेतन तर्फ निर्बलताबाट सबलता तर्फ जीवन बाट ब्रहम तर्फ प्रत्यक्षबाट परोक्ष तर्फ यवंम सिमितता बाट असीमितताको यात्रा नै योग हो । योग एउटा बिज्ञान हो, मानिसको जीवन शैलि हो जीवन पद्धति हो ब्याधियुक्त समाधी मुक्त जिवनको सार हो । योग आत्मा उपचार यबंम आत्मदर्शनको श्रेष्ठ आध्यात्मिक बिध्या हो ।
योग रोगी व्यक्तिहरुका लागी उपचार पद्धति हो घर गृस्तिका लागि जिवन पद्धति हो भने साधु सन्तक लागि साधन पद्धति हो त्यसैले योग सबैको लागि हो । योगले शरीर आत्मा बिचको सम्बन्धलाई जोड्ने काम गर्छ । योगले सम्पुर्ण अङ्गमा पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन पुर्याउने काम गर्दछ योग बाट मानसिक शान्ति का साथै रोग प्रतिरोधात्मक क्षामताको समेत वृद्धि हुने गर्दछ । योगलाई उपचारकोआधार मानिन्छ ।
योगको प्रनेता भनेर भगवान शिवलाई भनिन्छ सर्वप्रथम भगवान शिवले पार्बतीलाई योग सिकाउनु भयको कुरा सास्त्रहरुमा उल्लेख गरियको पाईन्छ । शिव बाट सुरु भयको योग बिध्या क्रमश सप्त ऋषि मार्फत गुरु शिष्य परम्परा हुदै एक पिढीबाट अर्को पिढीमा हस्तान्तरण हुदै हामी माझ आई पुगेको छ ।
योग साधना र विद्यालाई बिशेष महत्त्व ठान्दै सल्यान जिल्लामा पनि बिगत ६ वर्ष देखि योग संचालन भइरहेको छ । यसपटक असार ७ गत्ते परेको योग दिवस पनि भब्यताका साथ सम्पन्न भयको छ ।
दिवस्को अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा शारदा नगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रकाश भन्डारी, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रका डा. हिरा बस्नेत, अन्तरास्ट्रिय योग प्रशिक्षक योगीनि गीता श्री, पत्रकार सनत शर्मा, पतन्जली योग समितिका योग साधक, शारदा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लिलाधर बबाल, बडा नं. २ का वडाध्यक्ष सविन हमाल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
शारदा नगर प्रमुख भण्डारिले योग सबैको लागि अत्यन्तै आवस्यकता को बिषय भएको बताउदै योग साधनाको व्यवस्थापनमा आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने सहयोग गर्ने बताउनुुभयो ।